Qofna ma arko gaabinta iyo kor u kaca
015-012 Eebaa ka nasahan Cidhibta nolosha
Asccnds, —waarlaa, dabacsanaan, markii bilaash ah,
Dhimasho kasta oo cusub waxaan dib u eegnaa
Muuqaalka dheer ee isirkayaga
Raadkeenna dhaqammada badan ee kaladuwan ayaa raad raacay.
Vol. 1 JANUARY, 1905. No. 4
Xuquuqda, 1905, by HW PERCIVAL.
Dhibaatooyinka ugu badan ee ka xanaajiyey maskaxda bini aadamka, midkoodna ma sababay jahwareer ka badan midka wareegga ama soo noqnoqda dhacdooyinka.
Dadkii hore waxay isku dayeen inay ogaadaan sharciga wareegga si ay noloshooda ugu waafaqaan. Waqtiyadeena ragga waxay raadiyaan inay ogaadaan sharciga baaskiilka si ay ganacsigooda ugu fuliyaan si faa'iido leh. Waqtiyada oo dhan dadku waxay isku dayeen inay ogaadaan sharciga wareegyada maxaa yeelay aqoontaas oo kale waxay raaci karaan wax qabadkooda beero oo hubaal ah, cudurada faafa, daacuunka, iyo bixinta macluusha; sii sheegidda dagaallada, duufaanka, jahwareerka dhulka, iyo ka ilaali damacyada maskaxda; ogaato sababta dhalashada, nolosha, dhimashada, iyo xaaladda dambe; oo ka faa'iideysanaya waaya-aragnimadii hore, waxay ku sixi karaan dhacdooyinka mustaqbalka si sax ah.
Ereyga wareega waxaa laga soo qaatay Giriigga “kuklos,” oo macnaheedu yahay giraan, giraangiraha, ama goobada. Micnaha guud ahaan wareegga waa ficil iyo falcelinta dhaqdhaqaaqyada ka yimaada xarun, nooca iyo muddada wareegga waxaa lagu cabiro jihada iyo jihada dhaqdhaqaaqa marka ay ka tagayaan oo ay ku noqdaan halka ay ka yimaadeen. Dhamaadka hal wareega ama wareeggu waa bilow kale, sidaa daraadeed mooshinku waa wareegayaa, sida wareegga xarig ama furitaanka xargaha ubaxa.
Wareegtada waxaa loo qaybin karaa labo xiisadood oo ballaaran: kuwa la yaqaan iyo kuwa mawduucyo fikir ah laga fiirsado. Kuwa aan inta badan aad u yaqaanno waa wareegga maalin, markii dhulku sameeyay hal kacdoon dhammaystiran oo ku wareegsan wareeggiisa afar iyo labaatan saacadood; wareegga bisha dayaxa, marka dayaxu uu sameeyo hal kacaan oo adduunka ah maalmihii 28; wareegga hal sano, markii dhulku dhammaystiray hal kacaan oo ku wareegsan qorraxda isla markaana ay qorraxdu sameysay hal kacaan iyada oo loo marayo calaamadaha zodiac, muddo qiyaastii ah maalmo 365 ah; iyo sanadka dhiniciisa ama wareegga ka-hortagga isleegyada markii cirifka dhulbaraha uu mar ku wareegey cirifka ecliptic-ka sannadihii 25,868.
Waa arin aqoon guud ah in laga soo bilaabo safarkii muuqda ee qorraxda illaa qaab dhismeedka xayawaannada loo yaqaan 'zodiac', waxaan heleynaa afarta xilli ee: gu'ga, xagaaga, deyrta, iyo jiilaalka, oo mid kastaa uu kordhayo muddo seddex bilood ah, iyo mid kasta oo ka mid ah bilahaas waxaa loo qaybiyaa afar meelood meel ahaan iyo jajab, rubuc kasta oo bisha ah waa wajiga dayaxa oo ah rubuc koowaad, dayaxa buuxa, rubuc qarnigii la soo dhaafay, iyo dayaxa cusub. Zodiac waa saacadda ugu weyn ee dhinaca, qorraxda iyo dayaxu gacmaheeda oo calaamadeeya waqtiyo waqti ah. Zodiac ka dib waxaan diyaarinnay Chronomitir kaas oo leh laba iyo toban astaamo; Kuwani waxay calaamad u yihiin xilliyada iftiinka iyo mugdiga maalin gudaheed laba jeer laba iyo toban saacadood.
Mawduuca xiisaha u leh tirakoobka iyo taariikhyahanku waa muuqaalka wareega ee fekerka, belaayada, abaarta, iyo dagaallamayaasha; muuqaalka baaskiilka iyo luminta jinsiyadaha, iyo xilliyada soo noqnoqda oo soo noqnoqodka iyo hoos u dhaca ilbaxnimada.
Meelaha socodka shaqsiyeed dhexdooda waxaa ka mid ah wareegga nolosha oo hadda ka gudba aurada ku wareegsan jirka oo u gudubta qolalka sambabbada, halkaas oo dhiigga loogu adeegsado sida gaarigiisa loogu gudbayo xididdada sambabada ee xididdada bidix, ka dibna loo gudbiyo bidix ventricle, ka dibna sii gudbida aorta waxaa loo qaybiyaa dhammaan qaybaha jirka sida dhiig halbowle ah. Nolosha hadda jirta iyo unugyada nolosha waxay ku soo noqotaa xididdada dhiigga illaa xididka, halkaasna waxay ka soo martaa marinka cavae ilaa saxda saxda ah, halkaas oo ay ka gaarto marinka midig, iyo halkaas oo ay ka gasho halbowlaha wadnaha ilaa sanbabada, halkaas oo, markii la nadiifiyey, mar labaad. wuxuu noqdaa side nolosha oo dhammeeya, wareegga dhameystiran oo shaqeynaya qiyaas ahaan soddon ilbiriqsi.
Waxayaabaha ugu muhimsan ee dhammaan wareegyada annaga noo ah waa cyclc-ga oo lagu daro gobolka ka hor dhalashada, dhalashada, nolosha adduunyo, geerida, iyo xaaladda dhimashada ka dib. Marka loo eego muujinta wareegaan, aqoonta dhammaan wareegyada kale ayaa la socon doona. Waxaan aaminsanahay in horumarka ka hor dhalashada aadanaha taariikhda gebi ahaanba meeraheena ay tahay mid la soo koobay.
Jirka bini’aadamka ayaa loo xiray inuu socdo ilaa waqti cayiman, wareegga noloshiisa. Muddadan, da 'hore ee nolosha bini-aadamka ayaa mar labaad noloshiisa ku noolaatay. Markaas giraangiraha nolosha ayaa isu beddelaya wareegga dhimashada.
Waxay la mid tahay wareegga dhalashada iyo nolosha iyo geerida falsafadihii hore waxay ka welwelsanaayeen, maxaa yeelay aqoontooda waxaa laga yaabaa inay ka gudbaan kana soo baxaan xiisahaas, kaas oo la sheegayo, safar ma soo noqdo. Ujeeddada horumarka ka horreysa dhalashada ayaa ah in la soo jiido walxaha caalamiga ah hal jidh, laguna qaabeeyo qaab bini-aadamka, kaasoo bixiya fursadda ugu weyn ee waayo-aragnimada loo adeegsado mabda'a caqliga leh, maskaxda, taas oo ah in lagu dego jidhka aadanaha. Maskaxda ujeedada noloshu waa in la helo aqoon laxiriirta caalimka, inta lagu gudajiro iyo inta jirka lagu jiro, in la sameeyo waajibaadka lasoco aqoontaas, iyo in mustaqbal lagu dhiso khibradaha soo maray.
Dhimashadu waa xiritaanka, dib u eegista iyo isku dheelitirka shaqada nolosha, iyo waa waddo loogu laabto dunida fikradaha dunidan ka timid. Waa Albaabka loo maro nolosha ay nafteeda ugu soo noqoto xaggeeda.
Xaaladda dhimashada kadib waa waqtiga nasashada iyo soo-noqoshada shaqada nolosha kahor bilowga nolosha kale.
Dhalasho iyo geeri waa aroortii iyo fiidkii nafta. Noloshu waa mudada shaqada, marka geeridu timaado nasasho, soo kabasho, iyo soo kabasho. Sida waajibaadka lagama maarmaanka ah ee subaxnimada loo sameeyo ka dib nasashada habeenkii, ka dibna shaqada maalinta, waajibaadka fiidkii, oo ku soo laabashada nasashada, sidaas darteed naftu waxay gashanaysaa lebbisyadeeda ku habboon oo waxay ka gudubtaa muddada carruurnimada, hawl gal. shaqada maalinta dhabta ah ee nolosha, waxaana loo qoondeeyay fiidkii da'da, markii naftu u gudubto nasashadaas oo u diyaarin doonta safar cusub.
Dhamaan ifafaalaha dabeecadda waxay sheegtaan sheekada nafta iyadoo loo marayo wareegeeda, abuurisyadii iyo dib-u-noolaanshaha nolosha. Sideen u dejinaynaa wareegyadaas, sida aan u dardargelinno, u yareyno ama aan u beddeleyno ujeedooyinkooda? Markuu jidku runtii arko, mid walbaa wuxuu ku helaa awoodiisa inuu sameeyo. Jidku waa fikirka. Adigoo fikir ka helaya maskaxda ayaa naftii dunida timid, fikir ahaantiina naftiina waxay ku xidhnayd dunida, oo fikirka ayaa laga qaaday xorriyadda nafta.
Dabeecadda iyo jihada kuwa fikirka leh ayaa go'aamiya dhalashadiisa, dabeecadiisa iyo aayahiisa. Maskaxdu waa aqoon-isweydaarsiga jidhka, fikradaha laga soo qaatay aqoon isweydaarsigan ayaa u gudbaya meel ay ku soo laabtaan muddo dheer ama ka gaaban marka loo eego abuurkooda. Sida fikradaha la abuuray ay u saameeyaan maskaxda dadka dabeecad ahaan sida fekerka, ayay u laabtaan abuurahooda si ay uga falceliyaan isaga sida ay ugu dhaqmayeen kuwa kale. Fikradaha nacaybka, is-jeclaysiga iyo wixii lamid ah, waxay ku qasbaan hal-abuurkooda inuu waayo-aragnimo u yeesho oo uu adduunka ku xidho.
Fikradaha ikhtiyaar-la'aanta, naxariis, iyo hamiga, waxay ku dhaqmaan maskaxda dadka kale, iyo, ku soo noqoshada abuurahooda, kana xoreeyaan silsiladaha dhalashada soo noqnoqda.
Waa fikirradan oo ninku had iyo goor sameeyo mashruucyo isaga ka dib markuu dhinto. Waa inuu la noolaadaa fikradahan, dheefshiido iyo iskufiirin, midkastaba fasalkiisa, kadib wixii la qabtay, waa inuu ku noqdaa aduunkan, iskuulka iyo baraha nafsada. Haddii fiiro gaar ah la siiyo xaqiiqda, waxaa la ogaan doonaa in ay jiraan waqtiyo qofka noloshiisa ku jira oo halkaas niyada qaarkood soo noqnoqdaan. Marxaladaha quus, jahwareer, rajo xumo; waqtiyo farxad iyo reyn reyn leh; mudooyinka hamiga ama hamiga. Xilliyadan ha la xuso, la dagaallama fikradaha xun xun, kana faa'iidayso fursadaha wanaagsan.
Aqoontaani waxay ku imaan kartaa oo keliya qofka u “caqli yeelaya sidii abeeso oo kale” sidii qoolley oo aan innaba waxyeello u lahayn.